Trump oo sheegay in Kim John-un uu ogolaaday qodob xasaasi ah oo uu bandhigay.
0 Tuesday June 12, 2018 - 11:40:02
Maxaa ka soo baxay kulan dhexmaray Wasiirka Gaashaandhiga Somalia & Brig. General Pietro Addis?
0 Tuesday June 12, 2018 - 11:34:12
Wasiirka cusub ee Wasaaradda gaashaandhiga Xasan Cali Maxamed Brig. Jen. Pietro Addis oo ah taliyaha xafiiska howlgalka Midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho.
Akhriso: Qodobada heshiis ay kala saxiixdeen Madaxweyne Trump & dhigiisa Kim John-un (Sawirro)
0 Tuesday June 12, 2018 - 11:01:15
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo kulan taariikhi ah ku yeeshay dalka Singapore ayaa qalinka ku duugay heshiis nabadeed.
Dowlad kale oo aqbashay markab siday muhaajiriin Talyaaniga u diiday dalkiisa (Daawo Sawirro).
0 Tuesday June 12, 2018 - 10:39:34
Dowladda Spain ayaa aqbashay in markabkii siday muhaajiriin gaaraya 629 qof kadib markii Talyaniga iyo jasiiradda Malta ay diideen in markabka uu ku soo xirto dekadohooda, wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sidaasi ku so warantay.
Xaalada adag oo saaka mar kale ka aloosan jidadka Muqdisho & shacabka oo qadiyaan taagan.
0 Tuesday June 12, 2018 - 10:36:48
Ciidamada amniga dowlada Somalia ayaa saaka mar kale xiray wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho, iyagoo joojiyey isu socodka gaadiidka.
Shil ay ku naf waayeen ku dhowaad toban ruux oo ka dhacay webiga Shabelle.
0 Tuesday June 12, 2018 - 09:03:58
Faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya doon ay saarnaayeen ku dhawaad 20 qof oo xalay rogmatay Wabiga Shabeelle ee mara gobolka Shabeellaha hoose.
Daawo Sawirada: Madaxweyne Trump iyo Kim John Un oo markii ugu horeesay kulmay.
0 Tuesday June 12, 2018 - 08:31:17
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa ku kulmay dalka Singapore, kaddibna is-gacan qaaday. Kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee labada hoggaamiye yeesheen.
Madaxweyne Waare Oo La Kulmay Saraakiil Sare Sare Oo Ka Tirsan Ciidamada Qalabka Sida (Daawo Sawirro)
0 Tuesday June 12, 2018 - 08:26:58
Madaxweynaha Hirshabelle Dr Maxamed Cabdi Waare ayaa Magaalada Muqdisho Afur iyo Casho Sharaf Ugu Sameeyay Qaar Ka Mid Ah Saraakiisha, iyo Sareeyeyaasha Ciidamada Qalabka Sida Ee Soomaaliya kana Soo jeeda Deegaannada Hirshabelle, iyadoo Madaxweynaha iyo Saraakiishaasi ay iska xog wareysanayeen arrima…
Maamulka degmada Gaalkacyo oo bilabay olole lagu dayactirayo wadada Laamiga ah ee Magaalada (Sawirro).
0 Tuesday June 12, 2018 - 08:08:34
Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug waxaa ka socda olole lagu dardargelinayo dayactirka wadada weyn ee laamiga ah ee dhexmarta magaalada ,iyadoo ay barbar socdaan dhismaha wadooyin kale ee cusub,madaa uu burur xoogani ku dhacay jidka oo mudo hore la dhisay aanna heli dayactir.
Maxamed Al-Suhaimi oo Dhaliilay Qaabka loo aadaamo Salaada iyo Baaritaano ku socda.
0 Tuesday February 20, 2018 - 10:55:44
Qoraa dalka Sacuudiga u dhashay ayaa wajahaya baaritaan iyo waliba in warbaahinta oo laga joojiyo ka dib markii uu ku talobixiyay in dalka Sacuudiga ay misaajidyada ku bateen ayna sababeen in la dhibasado.
Ahmadreza Djalali Oo Isagoo Dil Toogasho ah Ku Xukuman Ay Sweden Siisay Dhalashada Sweden.
0 Tuesday February 20, 2018 - 09:44:18
Sweden ayaa sheegtay iney dhalashada dalkaas iyo Baasaboorka muwaadinimo siisay Ahmadreza Djalali oo dhawaan dowlada Iran ku xukuntay dil toogasho ah.
Nabadoon Axmed Diiriye Cali Oo Muqdisho ku Geeriyooday.
0 Tuesday February 20, 2018 - 07:21:59
Nabadoon Axmed Diiriye Cali oo ka tirsanaa waxgaradka ugu caansan beelaha dega Koonfurta iyo bartamaha Somalia ayaa ku geeriyooday Magaalada Muqdisho.
0 Wednesday February 07, 2018 - 07:13:39
Amaanka Xarunta Dowlada Hoose ee Xamar oo si weyn loo adkeenayo .
0 Tuesday February 06, 2018 - 10:32:58
Amaanka xarunta Dowlada Hoose ee Xamar ayaa si weyn loo adkeenayaa, waxaana dayactir lagu sameenayaa koontaroolada hore ee laga soo galo xarunta Dowlada Hooxse oo kutaala Degmada Xamar Weyne.
Maxkamada Ciidamada Oo Xukuno Ku Riday rag Loo Heystay Qarixii Soobe.
0 Tuesday February 06, 2018 - 09:27:24
Maxkamadda Ciidamada qalabka sida ayaa saakay xukuno kala duwan ku riday rag loo haystay in ay maleegeen Qaraxii dadka badan ku dhineen ee ka dhacay Isgoyska Soobe 14-kii October ee sanadkii hore.
Khayre oo kormeeray Xarunta dowlada hoose ee Xamar, kulana la qaatay Masuuliyiinta gobolka.
0 Monday February 05, 2018 - 14:38:58
Raisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa booqday xarunta Aqalka Dowlada Hoose ee Xamar.
Axmed Madoobe oo Muqdisho soo gaaray, kana hadlay ujeedada safarkiisa.
0 Monday February 05, 2018 - 13:36:06
Xildhibaan goor dhow shir jaraa'id kaga dhawaaqay inuu iscasilay.
0 Monday February 05, 2018 - 12:34:06
Xildhibaan Axmed Taajir oo ka mid ahaa Baarlamanka Jubbaland kuna xirnaa Magaalada kismaayo ayaa ugu dmbeyn sheegay inuu iska casilay xubintii Xildhibaanimo.
0 Monday February 05, 2018 - 11:29:25
Guddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yarisow) ayaa warqad si rasmi ah ku joojiyey dhismaha ka socda dhulka ka soo horjeeda Dekedda magaalada Muqdisho ee degmada Xamar-Jabab, kadib markii uu warbixin ka dhageystay waaxda dhul bixinta ee gobolka…
Shirkii Golaha amniga Qaranka oo maanta ka furmaya Muqdisho & Qodobada looga hadlayo.
0 Monday February 05, 2018 - 10:26:43
Magaalada Muqdisho waxaa la filayaa maanta inuu si rasmi ah uga furmo shir looga hadlayo amniga Qaranka kaasoo ay ka qeyb galayaan Madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyadda dalka.